केजरीवालकाे अवसान, विवेकशील नेपाली र नयाँ शक्ति
Posted by Nirajan Thapa June 27, 2014
इमान्दार छवी निर्माण गर्न सफल करकार्यालयको एक कर अधिकृत, सरकारी सेवाबाट राजिनामा दिएर समाज परिवर्तनको सपना देखेर एउटा गैर्‍हसरकारी संस्थाको अभ्युदयमा लागिपर्दछ । संस्थाका मार्फत जब आम नागरिकहरुकोमा ऊ पुग्दछ, देख्दछ – विश्व अर्थतन्त्रमा उदाउँदै गरेको तर भ्रष्ट्राचारले आक्रान्त भारत ! निर्णय गर्दछ – भ्रष्ट्राचारका बिरुद्ध आवाज बुलन्द गर्ने । समर्थन पाउँछ गान्धीवादी नेता हजारेको । आन्दोलन एक हदसम्म सफल हुन्छ । अनि एउटा पार्टीको जन्म हुन्छ । आम आदमी पार्टी ! भ्रष्ट्राचार बढार्ने प्रतिकात्मक चुनाऊ चिन्ह कुचोले उसलाई न्यू दिल्लीको मुख्यमन्त्री त बनायो, तर अन्ततः तेल सकिन आँटेको दियो हुरुर्र बलेर निभे झैं केजरीवालको सत्ता आरोहण पनि ४८ दिन मैं समाप्त भो ! केही महिना पहिलेको भारतवर्षको कथा हो यो !
यता नेपाल खण्डमा चाँहि दुई गोटा कथाहरू छन् । एउटा कथा – नयाँ शक्तिको निर्माण र लालध्वज कामरेडको वरिपरी घुम्छ । जुन कथाको बीचमा अर्को एउटा पात्र पनि थपिन्छ – रबिन्द्र मिश्र ! कथा रोमाञ्चले भरिपूर्ण हुने नै भो जब दुई करेस्माटिक पात्रहरूको उपस्थिती कथामा हुन्छ ! र, अर्को एउटा बेढंगको कथा छ – विवेकशील नेपाली ! यो कथा पनि कम रोमाञ्चपूर्ण त हैन !
कथा शुरु गरौं विवेकशील नेपालीबाट ! देशमै बसेका र मुस्किलले केही युवाहरु भेला पारेर विभिन्न अभियान चलाउने युवाहरुको जमात हो यो । बढ्ता शहर केन्द्रीत । अझ भन्नुपर्दा काठमान्डु केन्द्रित । अझ साँच्चिकै भन्नुपर्दा “हाईफाई” जीवन शैली बाँच्ने गोडाएक थान युवाहरुको जमातले हुल बाँधेर शुरु भएको यो अभियानले संविधानसभा निर्वाचनमा भाग पनि लियो । मलाई अचम्म लागेको चाँहि राजनैतिक दलको हैसियत प्राप्त गर्नका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्न आवश्यक १० हजार थान हस्ताक्षरको जोहो यसले कहाँबाट गर्‍यो ? कसरी गर्‍यो ? यो बडो गम्भीर विषय छ । खैर, यसलाई यहि छोडौं – तर आफूहरुलाई परिवर्तनका संवाहकको स्वघोषणा गर्दै “कुकुर” चिन्ह लिएर संविधानसभा निर्वाचनको चुनाऊमा उठेको यस दल (जमात) लाई कुल ३ हजार ७७ (प्रत्यक्षतर्फ उठेका चार उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मतको योगफल) थान मत प्राप्त भो । यसको समीक्षा उनीहरुले के गरे त्यो म जान्दिनँ । तर वैचारिक सिद्धान्त विहिन दलको हविगती यस्तै हो । गैर्हसरकारी संस्था सञ्चालन गर्नु र एउटा राजनैतिक दल सञ्चालन गर्नुमा धेरै भिन्नता छ । जुन भिन्नताको भेऊ यी अभियानका अभियन्ताहरुले पाएका छैनन् । तीनचार दर्जन उद्देश्यहिन युवाहरुको हुल बाँधेर कस्तो परिवर्तनको सपना बाँडिरहेछन् यी, सोचनीय प्रश्न छ ।
त्यस्तै अर्को एउटा कथा हो नयाँ शक्ति निर्माण । जबजब एकिकृत नेकपा माओवादीभित्र आफ्ना धारणाहरु निस्तेज पारिएको भान हुन्छ तबतब डा. बाबुराम भट्टराईमा राष्ट्रिय एकता, शान्ति, समृद्ध र संविधानको निर्माणको भूत सवार हुन्छ । र, यी सबै आवश्यकताहरुको पूर्तिका लागि नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय आवश्यक रहेको जिकिर गर्न पुग्दछ । मुख्य भनिएका सबै दलहरु पुरातन सोच बोकेका नेताहरु र उनीहरुका आसेपासेहरुको जमघट गर्ने क्लब जस्तो बनेको भनी निकै टिकाटिप्पणी पनि गरिन्छन् । र, यस्तैमा अर्को एउटा पात्र थपिन्छन् – रविन्द्र मिश्र । ब्यावसायिक पत्रकारीताको लामो अनुभव हासिल गरिएका भनिएका मिश्रका आँखाले सबै दलका करिबकरिब सबै नेताहरुलाई असफल देख्दछ । र, नेपालको परिवर्तन अनि समृद्धी उनी बेलायत वा अन्य कुनै विकसितमुलुकको वर्तमान अवस्थासँग जोडेर हेर्न चाहन्छन् । जुन आफैमा त्रुटीपूर्ण छ । त्यसकारण पनि डा. भट्टराई र मिश्रले उठान गरेको नयाँ शक्तिको उदयको आवश्यकता सम्बन्धि बहस अहिले पूर्णतः निस्तेज हुन पुगेको हो ।
जबसम्म कस्तो प्रकृतिको शासन ब्यवस्था ? उत्पादन र पूँजीसँगको सम्बन्ध, श्रोतको समुचित वितरण, आर्थिक समृद्धीको स्पष्ट खाका, द्धन्द्धको उचीत व्यवस्थापनमा अबलम्बन गराउनु पर्ने रणनीतिका बारेमा हामीहरु स्पष्ट खाका तयार पार्न असफल रहन्छौं, त्यहिले सम्म नयाँ शक्तिको बहस र विवेकशील नेपालीको जमात तयार पारेर मात्र हामीले समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न असमर्थ रहनेछौं । एकले अर्काको बिचारलाई इन्कार हैन, हार्दिकतापूर्वक हातेमाले गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्न असफल रह्यौ भने भोली देश सन् ९० को दशकको रुवान्डा वा सुडान बन्ने खतरालाई हामीले टार्न सक्ने छैनौं ।
dae yestae chaldai chha nepal ma party ko saath ma lagesi party ko nirnaya man parena bhani birod garni ho but nepal ma naya party ko ghosana nai gardinxan